प्लेटफर्महरू द्वारा प्रस्ताव गरिएको सबैभन्दा ताजा गर्मी श्रृंखला | बेजिया
प्लेटफर्महरू द्वारा प्रस्ताव गरिएको सबैभन्दा ताजा गर्मी श्रृंखला
सुसाना Godoy | 21/06/2022 14:00 | समाचार
यो सिजन आउँदा हामी सधैं ग्रीष्म श्रृंखलाहरू मन पराउँछौं। जसरी हामी वर्षको अन्त्यमा क्रिसमसको सिजनमा आफूलाई डुबाउन चाहन्छौं, अब हामी ती स्वर्गीय ठाउँहरू, ती विशाल समुद्र तटहरू र त्यो राम्रो मौसमको लागि सबै कुरा परिवर्तन गर्छौं। तसर्थ, यदि तपाइँसँग अझै छुट्टी छैन भने, तपाइँ प्लेटफर्महरूले तपाइँलाई प्रस्ताव गर्ने विकल्पहरूको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ।
किनकि तिनीहरू तपाईंको भूखलाई मेटाउनको लागि उत्तम छन् अर्को गर्मी बिदाहरू कुनाको वरिपरि छन्। हामीले फेला पारेका ग्रीष्म श्रृंखलाहरूमा प्लटहरू छन् जसले तपाईंलाई समात्नेछ यदि तपाईं विभिन्न प्रकारका थिमहरूको आनन्द लिन चाहनुहुन्छ भने। त्यसोभए, यो हामीले तल उल्लेख गरेका प्रत्येकमा शर्त लगाउने समय हो।
1 गर्मी म प्रेममा परें
3 गर्मीको चुनौती
4 गर्मी मौसम
गर्मी म प्रेममा परें
सबैभन्दा धेरै चर्चा भइरहेको शृङ्खला यो हो। किनभने 'गर्मी म प्रेममा परें' ती युवा कथाहरू मध्ये एक हो जुन सधैं हुर्कन्छ। यो जेनी हानका पुस्तकहरूको रूपान्तरण हो र यस कथामा हामी पहिलो प्रेम जस्ता विषयवस्तुहरूको आनन्द लिन सक्छौं तर आमा र बच्चाहरू बीचको सम्बन्धका साथै गर्मीको मौसमको पाठ्यक्रम र यसले हामीलाई उत्कृष्ट बनाउन छोड्ने सबै सामग्रीहरूको मजा लिन सक्छ। । निस्सन्देह, यदि हामी उनको तर्कमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्छौं भने, यो भनिन्छ कि यो एक युवती र दुई भाइहरू मिलेर बनेको प्रेम त्रिकोण हो। तपाईंसँग पहिले नै यो अमेजन प्राइममा उपलब्ध छ र अवश्य पनि, यो अहिलेबाट बाँच्न सुरु गर्नका लागि उत्कृष्ट प्रस्तावहरू मध्ये एक हो।
ग्रीष्म श्रृंखलाको बीचमा हामी तालहरू पनि चिसो हुन सक्षम भएको फेला पार्छौं जुन हामी योग्य छौं। हामीले फेरि त्यो उल्लेख गर्नुपर्छ तपाईले यसलाई अमेजन प्राइममा फेला पार्नुहुनेछ र यस अवस्थामा यो कमेडी हो, छोटो अध्यायहरु संग धेरै चाँडै देखिने। हामी तपाईंलाई मूडमा राख्छौं: यो एक व्यक्तिको बारेमा हो जो लामो समयदेखि विदेशमा बस्दै आएको छ, जबसम्म उसले आफ्नो छोरीसँग पुनर्मिलन गर्न क्यानाडा फर्कने निर्णय गरे जसलाई उसले धर्मपुत्रको लागि त्याग्यो। तर उसलाई थाहा छ कि सबै कुरा अपेक्षा गरेजस्तो सुन्दर हुनेछैन, किनभने त्यहाँ एक विरासत समावेश छ जुन अपेक्षित रूपमा बाहिर आउँदैन। अब तपाइँ यसलाई कसरी समाप्त हुन्छ भनेर पत्ता लगाउन सक्षम हुनको लागि यसलाई पूरा हेर्नु पर्छ।
यो 10 एपिसोडहरूको शृङ्खला हो र यदि तपाईंलाई सर्फिङ मन पर्छ भने, तपाईंले यसलाई मिस गर्न सक्नुहुन्न। जुन समयको शुरुवात थियो 'समर च्यालेन्ज' Netflix मा अवतरण भयो। यसमा तपाईले अष्ट्रेलियाको परिदृश्य र पक्कै पनि यसको समुद्र तटको मजा लिन सक्नुहुन्छ। यो नबिर्सन कि हामी पनि एक युवा नाटकको सामना गर्दैछौं किनभने यसको नायक समर हो। केही हदसम्म विद्रोही युवतीलाई न्यूयोर्कको उनको हाई स्कूलबाट निष्कासन गरिएको छ। त्यसैले आमाले उनलाई एउटा सानो सहरमा पठाइदिनुहुन्छ। हामी सधैं उहाँलाई यो सम्पूर्ण कथा कसरी समाप्त हुन्छ भनेर हेर्न मौका दिन सक्छौं, के तपाईंलाई लाग्दैन?
फेरि हामी यो अर्को श्रृंखलाको मजा लिन Netflix मा रहन्छौं। जस्तो कि हामीले देख्न सक्छौं, यसको शीर्षकले हामीलाई अपेक्षा गरेको भन्दा धेरै बताउँछ। राम्रो मौसम र गर्मीको कामले युवाहरूको समूहलाई एकअर्कालाई चिन्ने बनाउँछ। चार धेरै फरक छन् तर तिनीहरू एक लक्जरी रिसोर्ट र टापु स्वर्गको लागि एकजुट छन्।। त्यसोभए, तिनीहरू यस सिजनलाई ताजा गर्ने श्रृंखलाको अर्कोमा सट्टेबाजी जारी राख्नको लागि उत्तम सामग्रीहरू हुन्। हाल यसको 8 एपिसोड र एक सिजन छ। तर तिनीहरूले लुकाएका सबै रहस्यहरू र प्रेमको आगमन पनि पत्ता लगाउन सक्षम हुन पर्याप्त छ। एक ककटेल जुन लामो बाटोमा जान्छ र तपाईंले मिस गर्न सक्नुहुन्न। तपाईंले गर्मीको कुन शृङ्खला हेर्नुभयो?
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » समाचार » प्लेटफर्महरू द्वारा प्रस्ताव गरिएको सबैभन्दा ताजा गर्मी श्रृंखला
खराब गन्धबाट बच्न एयर कन्डिसनर सफा गर्नुहोस्